Indlu encinci ye-45 m2 kunye nophahla oluzimeleyo oluzimeleyo, olubekwe kwipropati yethu. 5 imiz. ukusuka kwiziko loqeqesho enedis kunye ne-30 min. ukusuka eLyon. Uya kufumana indawo yokuhlala entle kubandakanya ikhitshi, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala. Igumbi lokulala elahlukileyo (ibhedi eyi-140) kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa yokuhamba ligqibezela le seti. Ithala elikhulu le-20 m2 elijonge emaphandleni.
Ekuqaleni kohambo oluninzi, 3 ‘ukusuka echibini lokuloba
Indawo yokuhlala encinci ye-45m2, ithambile, ihonjiswe ngokwezinto zam zakudala. Kuye nekhitshi yaxhobisa ngokupheleleyo (lezonka, ifriji, Isitovu, sodastream, nespresso, njl Igumbi ubomi TV enkulu kunye umandlalo isofa xa kuyimfuneko. Indlu yangasese lixhotyiswe isinki kabini kunye walk-in hlambi The olu khetho silwenzileyo igumbi lokulala elinemibala linebhedi eyi-140.
Ehlotyeni, yonwabele ichibi lokuqubha ekwabelwana ngalo nathi kunye nenye i-cottage yethu. Sikwacebisa ukuba uyokukha imifuno yakho kwaye uqokelele amaqanda akho ukuba uyathanda.
I-terrace enkulu ye-20m2 igqibezela le ndlu ye-atypical.
Indawo yokulala ayijongi ngqo kwindawo yokuqubha. Le yindlu yedama ebonwa kumfanekiso ongaphandle; uphahla lweglasi yokusebenzela).
Nceda ungalibazisi ukuqhagamshelana nam ngezicelo ezizodwa.
Ndifumane kwi-Insta: chacel_airbnb
I-Sourcieux les Mines yidolophana yasemaphandleni, ehlala imizuzu engama-30 ukusuka eLyon kunye nemizuzu emi-5 ukusuka kwiziko loqeqesho le-enedis.
Indawo yethu yenziwe ngezakhiwo ezininzi zangaphandle. Usekuqaleni kohambo oluninzi.
Siyathanda ukunxibelelana nabakhenkethi bethu kodwa siyayazi indlela yokuhlonela imfihlo yakho.
Indlu yethu ikwipropathi. Kananjalo siza kudibana ngakumbi ehlotyeni malunga nedama lokuqubha kunye negadi yemifuno
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sourcieux-les-Mines